Ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - ndị na-emepụta ngwaahịa China
Iberibe Manicure 16 nwere akpa akpụkpọ anụ, ngwa ntu ntu akwa ngwa ngwa nlekọta onwe onye, ​​onyinye maka ụmụ nwoke/ụmụ nwanyị.
Nkọwa ngwaahịa 16pcs Ọkachamara Manicure Set / Nail Clippers Kit / Pedicure Care Tools/Ngwongwo Igwe anaghị agba nchara & Ndị inyom, PU Akpụkpọ anụ na-acha anụnụ anụnụ / nwa / ọla edo liner Manicure Set (16 Iberibe): Ọkachamara Manicure Kit nwere 16 iberibe ntu na mbọ ụkwụ atọ maka atọ. ọrụ, gụnyere nlekọta aka, nlekọta ihu, na nlekọta ụkwụ.Ntọala manicure Pedicure a nwere ihe niile ịchọrọ.Ngwá ọrụ dị elu 100% igwe anaghị agba nchara: Manicure na Pedicure bụ nke ọkachamara ịwa ahụ.
MURAN 2021 stampụ nku isi okpukpu abụọ nke isi nku mmiri na-adịghị adịte aka mmiri stampụ akara pen eyeliner.
MURAN okpukpu abụọ isi eyeliner nku stampụ mmiri na-adịghị adịte aka mmiri eyeliner pen stampụ akara
ANYỊ CAT-ESEXY NA SNAP - Gosipụta nku nku anya dị nkọ, nke nwere akara na stampụ dị mfe!
Anya na-adị ogologo oge - ngwa na-ehicha ngwa ngwa na-arụ ọrụ ya site n'ụbọchị ruo n'abalị!
HIGH PIGMENTATION - Mpempe stampụ dị mfe iji maka anya ọ bụla na-emepụta ahịrị matte na-enweghị ntụpọ na jet ojii!
SMUDGE-PROOF & KWESỊRỊ MMIRI – Nku anya nku anaghị agbaji.Ọ naghị egbochi mmiri, ọ naghị agbaji agbaji.
Ihe na-ekpo ọkụ ire etemeete Liquid nku anya pensụl mmiri na-adịghị adịte aka 4 Atụmatụ ndụdụ Microblading Nkume igbu egbugbu.
※ Ngwaahịa nkọwa: 1.Fine sketch, ọkachamara ahịhịa isi na-emepụta eke nkuanya 2.Long-adịgide adịgide, waterproof, mfe agba 3.100% ọhụrụ na elu àgwà 4.Portable size, mfe na-ebu.5.Ọ bụ maka nwaanyị ọ bụla na ya ike oge a ndụ.6.4 isi nwere ahịrị doro anya na mgbọrọgwụ dị iche ※ Uru: 1 na-adịte aka, dị mfe ijikwa 2 High mma, ọrụ kacha mma, Low MOQ nwere ike ika maka gị.Nkọwa ngwa ngwa Ebe esi: Zhejiang, China Aha ika: MURAN ịma mma Nọmba Model: E...
Nhazi ahịhịa etemeete 11pcs Premium ịchọ mma ahịhịa maka ntọala blush concealer anyashadow nku anya na-egosipụta pink make up brush
Ihe eji afụcha ahịhịa: ntutu sịntetik Ebe mmalite: Zhejiang, china Aha ika: OEM/ODM Nọmba Nlereanya: BRS0100PB Jiri: Ihu, Jiri ya na BLUSHER, CONCEALER, Pensụl nku anya, Eyeliner, Lip Liner, Mascara, Eye Shadow, FOUNDATION, Lip Balm, Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, lipstick, ịcha ahịhịa ihe ọ bụla: 11pcs Ihe eji eme ihe: Osisi Handle Feature Skin-friendly, Soft bristles Advantage Super soft nylon hair brush Style: Angular Blush, Flat Brush, Smudge Brush, Fan Brush, Foundation Brush Product Name: Makeup b...
5.Mmelite wrinkle na ezi ahịrị
MURAN kwụrụ ọtọ Ihu ịsa ahịhịa akwụkwọ ntuziaka na-asachapụ ahịhịa na akụkụ abụọ Silicone 3d ihu ihe ịchọ mma na-ahụ maka nlekọta anụ ahụ 2021
Nkọwa ngwaahịa Otu nkeji kwa ụbọchị, akpụkpọ ahụ dị nnọọ iche ( Nke a bụ brush na-ehicha nke ọma nke na-asachapụ pores nke na-ewepụ ụzọ omenala nke ịsacha ihu gị ma nye gị ahụmahụ dị ọcha ọhụrụ) Ahịhịa ihe: eriri sịntetik Ebe Mmalite: Zhejiang, china Ụdị aha: OEM/ODM Nọmba Model: MR0086ZLS Jiri: Ihu, Boby Ojiji: Nlekọta Na-ehicha Ihu Ihe n'otu setịpụ: 1pcs Ihe eji eme ihe: Ngwa Aka Plastic maka Azụmahịa & Ụlọ Jiri Uru Super soft nylo...
N'ogbe ụlọ ọrụ dị ọnụ ala ọnụ ahịa na-akpa ọchị akwa ekara mma etemeete sponge, 4pcs etemeete ntọala ntụ ogbo edobere n'ime igbe akwa.
Sponge etemeete maka ụdị ịchọ mma niile, ntọala, ude BB, ntụ ntụ, concealer, iche, mmiri mmiri, wdg Mere site na ihe na-abụghị latex, mmetụta dị nro, sponge mara mma nke ọma, dị mfe ịmata ọdịiche mara mma etemeete blender sponge na-enye gị ngwa etemeete zuru oke. , zere ihe ịchọ mma Wet na nkụ, ịgwakọta sponge na-aghọwanye ibu mgbe mmiri dị, na-agba ya evenly to form a gorgeous makeup Product Name funny egg shaped beauty makeup sponge, makeup foundation powder sponges in egg's bo...
N'ogbe ụlọ ọrụ dị ọnụ ala ọnụ ahịa na-akpa ọchị akwa ekara mma etemeete sponge, 8pcs etemeete ntọala ntụ ntụ sponge atọrọ n'ime igbe akwa.
Sponge etemeete maka ụdị ịchọ mma niile, ntọala, ude BB, ntụ ntụ, concealer, iche, mmiri mmiri, wdg Mere site na ihe na-abụghị latex, mmetụta dị nro, sponge mara mma nke ọma, dị mfe ịmata ọdịiche mara mma etemeete blender sponge na-enye gị ngwa etemeete zuru oke. , zere ihe ịchọ mma Wet na nkụ, ịgwakọta sponge na-aghọwanye ibu mgbe mmiri dị, na-agba ya evenly to form a gorgeous makeup Product Name Funny egg shape beauty makeup sponge, makeup foundation powder sponges in egg's bo...